खुसिको खबर – रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो ! – Life Nepali
खुसिको खबर – रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो !
काठमाडौं । रुसले कोरोना भा’इरसको भ्या’क्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले विभिन्न देशहरुमा भ्या’क्सिनको माग भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाले र युरोपमा पनि भ्या’क्सिनको विकास हुँदैछ । स’म्भ’वत सन् २०२१ को शुरुमा भ्या’क्सिन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले सैनिक र स्वा’स्थ्यक’र्मी’मा कोरोना भ्या’क्सिनको प्रयोग शुरु गरिसकेको छ । *** भिडियो हेर्न तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
सँसारका शक्तिशाली र धनी देशहरुले कोरोना भाइरसको भ्या’क्सिन विकास गरी प्रयोगको समेत तयारी गरेका छन् । तर, आर्थिक रुपमा विप\_न्न देशहरुले भ्या’क्सिन कहिले प्रयोग गर्न पाउलान् ? यो ग’म्भीर प्रश्न बनेको छ । नेपालमा भ्या’क्सिन कहिले आइपुग्ला ? यसलाई केलाउँदा भ्या’क्सिन कति प्रकारका उत्पादन हुन्छन ? कुन कुन देशले उत्पादन गर्छन् ? कति मात्रामा उत्पादन गर्छन् ? मुल्य कति पर्छ ? माग र आपू’र्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? उत्पादन गरिएका भ्या’क्सिनको प्रभावकारिता, सुरक्षा र विश्वसनीयता के हुन्छ ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैमा पहुँ\_च पुर्याउने कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्ने यथा’र्थलाई के’ला’उनुपर्ने हुन्छ ।
धनी देशहरु अहिले नै भ्या’क्सिन प्रयोग गरेर ढु’क्कसाथ आर्थिक तथा सामाजिक गतिवि\_धिमा स’क्रिय हुने तयारीमा पुगिसकेका छन् । कोरोना भा’इरसले सम’स्यामा पारेको नेपाल जस्तो देशहरुमा यस्तो तयारी देखिदैन । यसले कम्तिमा एक वर्ष आर्थिक गतिविधिमै सम’स्या पारिरहने ख’तरा बढेको छ । खोप आउन २०२१ सम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । **** थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
Previous कोरोना खोपलाइ लिएर एकाबिहान नेपालमा आयो यस्तो खुसिको खबर !
Next सम्पूर्ण देशबासीहरुका लागि भर्खरै सरकारबाट आयो यस्तो सुचना – ( सबैले पढ्नै पर्ने )